» के रचना रिमाललाई सर्वाधिक भोट प्राप्त होला ?
के रचना रिमाललाई सर्वाधिक भोट प्राप्त होला ?
१९ असार २०७७, शुक्रबार १५:३१
मकवानपुर, १९ असार । नेपाल आईडल सिजन ३ अहिले लकडाउनका कारण स्थगित अवस्थामा छ । प्रतियोगिताको वाईल्ड कार्ड राउण्ड समाप्त भएसँगै लकडाउनका कारण प्रतियोगिताको नयाँ श्रृङ्खलाहरु बन्द भएको हो । अहिलेको महामारीको अवस्था साम्य हुनसक्ने अवस्था भएमा चाँडै नै नेपाल आईडल सुरु हुने अपेक्षा दर्शक र प्रतियोगीहरुको छ । यसबिचमा एक पटक शोबाट बाहिरिएर पून वाईल्ड कार्ड राउण्डमा भिडेकी रचना रिमालको चर्चा भने सेलाएको छैन । रचनाले गाला राउण्डको तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हप्तामा गरी ३ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेता पनि उत्कृष्ट ८ सम्ममात्र पुग्न सफल भएकी थिईंन् । वाईल्ड कार्ड राउण्डभन्दा अघि कुनै पनि अवार्ड नजितेकी रचनाले वाईल्डकार्डमा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जित्न सफल भएकी थिईन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
तिनपटक सर्वाधिक भोट प्राप्त हुँदा पनि अचानक सोबाट बाहिरिएकी रचनालाई वाईल्डकार्डमा सर्वाधिक भोट प्राप्त भएको हुनसक्ने अनुमान दर्शकहरुले गरेका छन् । तर उनीसँगै भिडेकी सिजन ३ की एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता मेघा श्रेष्ठ, मिग्मा लामा, किरणकुमार भुजेल र ममता गुरुङ पनि वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीको दाबेदारका रुपमा उभिएका कारण उनले सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्न सक्लिन् वा नसक्लिन् भन्ने कुरामा दर्शकहरुको निक्कै चासो देखिएको छ । रचना दर्शकहरुमाझ सानी बुनुका रुपमा चर्चित छन् । त्यतिमात्र नभई उनका प्रस्तुतिहरुमा पनि सर्वाधिक भ्युज आउने गरेको छ । रचनाले सिजन ३ मा गाएकी एउटा भिडियो क्लिप त नेपाल आईडलकै सबै सिजनमा सर्वाधिक हेरिएका एकल प्रस्तुतिहरुको चौथो नम्बरमा छ । नेपाल आईडलको अफिसियल युट्युब च्यानलमा अपलोड भएका भिडियोहरुमध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी भाईरल भएको एकल प्रस्तुतिको भिडियोको आधारमा चौथो स्थानमा रचनाको प्रस्तुति रहेको छ । उनले गाला राउण्डमा गाएकी ‘खुट्टा तान्दै गर’ बोलको गीत सबैभन्दा बढी भाईरल भएको एकल प्रस्तुतिको चौथो नम्बरमा छ । बुद्धविर लामाको शब्द, शिलाबहादुर मोक्तानको संगीत र कुन्ती मोक्तानको आवाजमा रहेको यो गीतलाई रचनाले प्रस्तुत गर्दा श्रोता दर्शकले मन पराएका थिए । ५ फेब्रुअरी २०२० मा युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको यस भिडियोलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ६ लाख ७० हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा १५ हजार लाईक र ३ सय ५२ डिसलाईकहरु गरिएका छन् । भिडियोमा ८ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
झापाको भद्रपुर निवासी रचना रिमाल १७ वर्षकी छिन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत रचनाले सानै उमेरमा संघर्ष गर्न सिकेकी छिन् । सानो छँदा मन्दिरमा भजन गाउने गरेकी रचनाले विद्यालयमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिँदै गीत गाउन थालेकी हुन् । कक्षा ९ मा अध्ययन गर्दाको समयमा संगीतको कक्षामा भर्ना भए पनि उनले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिनन् । उनको संगीत सिकाईको समय ४ महिनामा मात्र सिमित भएको थियो । संगीतमै करियर बनाउने योजनामा रहेकी रचनालाई संगीतमा लगाव भएका कारण उनका आमाबुवाले समेत साथ दिएका छन् । आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? के रचनाले यसपटक पनि सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्नेछिन् जस्तो तपाईलाईलाई लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।